Maamulka Deegaanka Halgan oo ka hadlay Odayaashii Dhaqanka ee galabta lagu laayay Deegaankaasi – STAR FM SOMALIA
Mustaf Xerow Nuur, Gudoomiyaha Deegaanka Halgan ee Maamulka Gobolka Hiiraan, ayaa sharaxaad ka bixiyay qaabka ay Ciidanka Itoobiya ku dileen Odayaashii Dhaqanka, ee maanta ka amba baxay Magaalada Baladweyne, kuna wajahnaa Deegaankaasi.
Gudoomiyaha, ayaa yiri “Odayaasha waxay la socdeen gaari caasi ah oo ka yimid dhinaca Magaalada Baladweyne, balse waxay ku socdeen wado qardo jeex ah, oo aan ahayn wadada laamiga ee ka timaada Baladweyne.”
Gudoomiyaha, ayaa markale yiri “Waxay ku soo dhaceen wado ay difaac kaga jireen Ciidamada Amisom, askartii waxay ku amartay in gaariga la joojiyo. Darawalkii oo qalqalay ayaa markiiba inta uu gaariga kala wareejiyay isku deyay inuu cararo, askartana rasaas ayay ku furtay.”
Dhacdadan, ayuu ku tilmaamay shil si kedis ah u dhacay, wuxuuna tibaaxay inay ka xun yihiin sida khaldan ee lagu dilay Odayaasha Dhaqanka, laguna dhaawacay.
“Waa dhacdo ama shil si kedis ah ku dhacay ee maaha wax loogu tala-galay dadkii gaariga la socday. Waan ka xunahay dadkii ku dhintay, kuna dhaawacmay shilkaasi.” Ayuu yiri yiri Mustaf Xerow Nuur
Xerow oo caawa la hadlay Warbaahinta gudaha, ayaa xaqiijiyay dhimashada lix qof oo Odayaal ah iyo dhaawaca tiro kale oo intaasi ka badan, isla-markaana ay dhaawacyada u qaadeen Magaalada Baladweyne.
Waxaa caawa soo baxaaya warar sheegaaya in la xiray laba ka mid ah Ciidanka Militariga Itoobiya ee qaybta ka ah Amisom, kuwaa oo lala xiriirinaayo inay iyagu rasaasta ku furayn gaariga.